Xiddiga Reer Brazil Ee Willian Oo Shaaciyey Inuu Khilaaf U Dhexeeyo Tababare Conte | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Xiddiga Reer Brazil Ee Willian Oo Shaaciyey Inuu Khilaaf U Dhexeeyo Tababare Conte
(18-5-2018) Cayaaryahanka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Chelsea ee Willian ayaa shaaciyey inuu jiro khilaaf u dhexeeya isaga iyo tababare Antonio Conte ka hor ciyaarta finalka FA Cup ee Manchester United ay iskaga hor iman doonaan Sabtida.
Xiddigan reer Brazil oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay ciyaaryahannada ugu wanaagsan ee Chelsea wakhtigan ku sugan, dhowaanna loo doortay laacibkii ugu fiicnaa Chelsea sannadkan, ayaa waxa uu marar badan galay kursiga kaydka gaar ahaan kulamadii ugu dambeeyey.
Shantii ciyaarood ee ugu dambeeyey, hal kulan ayaa uu tababare Conte ku bilaabay safkiisa Willian, waxaana ay ciyaartaasi ahayd kulankii barbar dhaca 1-1 ku dhamaaday ee sababta u noqday in Blues ay dhigto rajada ay ka qaybtay inay ka mid noqoto afarta ugu sarraysa, ka hor intii aanay Newcastle qalbiga ka jabinin.
Willian oo waraysi siiyey ESPN Brasil, ayaa su’aal laga weydiiyey inuu faahfaahiyo nooca uu yahay xidhiidhka ka dhexeeya tababare Conte, waxa uu ku gaabsaday in aanu wakhtigan ka hadlaynin, hase yeeshee, uu waraysiga dambe ku faahfaahin doonto, taas oo loo fasiray in ismaan-dhaaf weyni jiro.
Chelsea ayaa Sabtida garoonka Wembley kula ciyaari doonta Manchester United finalka FA Cup, waxaana uu kulan ciyaareedkani kusoo beegmayaa xili ay Chelsea kala daadsan tahay, isla markaana ay ka muuqato niyad jabkii ay ka qaadeen inay ka qadayaan tartanka Champions League xili ciyaareedka dambe.